သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: October 2006
မြန်မာပြည်မြေပေါ်မှာ ကြီးပြင်းလာစဉ်က လူကြီးသူမတွေရဲ့ စကားက
၀ဋ်ဆိုတာ တပတ်လည်တတ်တယ်..တဲ့ ….
ငယ်ရွယ်စဉ်အခါ တချို့ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေရဲ့ 
ခါးပတ်နက်ကိုအားကျခဲ့စဉ်တုန်းက အဖေနဲ့ အမေကတားမြစ်ခဲ့ဖူးတယ်..
ဓါးကိုင်သူဟာ ဓါးနဲ့ ပဲအသက်ဆုံးရတတ်တယ်…တဲ့...
ဒီနိုင်ငံရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ အမြဲပြောနေကြစကားက
Whatever goes around, comes around.. တဲ့..
သင်တို့ စိုက်သည့်အတိုင်း ရိတ်သိမ်းကြရတတ်သည်..တဲ့
ဘ၀ဆိုတာ အကွေ့ အကောက် အနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ 
Roller Coaster, up down, up down….
And around … and around….တဲ့
၀ဋ်မလိုက်ပဲ သေသွားချိန်အထိ ကောင်းစားသွားတဲ့သူတွေကိုလဲ မြင်နေရတယ်…
ကိုယ့်ဆီတနေ့....
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 9:52 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : အချစ်ဆုံး
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 10:35 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 10:00 PM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : အချစ်ဆုံး, သေဆုံးခြင်း
ကြည်လင်ပြာလဲ့တဲ့ ရေကန်ကြီးတခုထဲမှာ နေရောင်ခြည်နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ ရေကန်ကြီးရဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်က ရွှံ့နွံတွေပေါ်မှာ ရေပိုးကောင်လေးတွေဟာ ကိုလိုနီဖွဲ့ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်၊ အဲဒီရေကန်ကြီးထဲမှာ ကြာဖြူကြာနီပန်းတွေ လှပစွာပွင့်နေကြတယ်။ ရေကန်ကြီးထဲက ရေပိုးကောင်လေးတွေထဲမှာ တချို့တွေဟာ တခါတရံကြာရိုးတွေအတိုင်းတွယ်တက်သွားကြတယ်။ တွယ်တက်သွားကြတဲ့ ရေပိုးကောင်လေးတွေက ပျောက်ပျောက်သွားကြပြီး ဘယ်တော့မှပြန်မလာကြတော့ဘူးတဲ့။
တနေ့မှာ ရေပိုးကောင်လေးတကောင်အဲလိုပဲ ကြာရိုးပေါ်ကိုတွယ်တက်နေတော့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ တခြားပိုးကောင်လေးတကောင်က
“ဟော.. ဟိုမှာတကောင် တွယ်တက်နေပြန်ပြီ” လို့ပြောတယ်။
နောက်တကောင်က “ဘယ်များသွားမလို့ပါလိမ့်” လို့ပြောတယ်။
ကြည့်နေရင်းနဲ့ တွယ်တက်သွားတဲ့ပိုးကောင်လေးက မြင်ကွင်းကပျောက်သွားတယ်။
“သူ ဒီမှာ မပျော်လို့များလား” လို့ တတိယတကောင်ကပြောတယ်။
ရေပိုးကောင်အကြီးအကဲက အားလုံးကို အစည်းအဝေးခေါ်လိုက်တယ်။ နောက်ထပ်တွယ်တက်မယ့်ရေပိုးကောင်ဟာ ဘယ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ လှပတဲ့နွေဦးရာသီတခုရောက်တော့ အဲဒီရေပိုးကောင်အကြီးအကဲကိုယ်တိုင် ကြာရိုးပေါ်ကို တွယ်တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်နေမှန်းမသိခင်မှာပဲ ရေမျက်နှာပြင်အပေါ် ကြာပွင့်ထိပ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ ကြာပွင့်ထိပ်ကိုရောက်တော့ ရုတ်တရက် ရေပေါ်ကကြာရွက်တရွက်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ ပြီးတော့မောလွန်းလို့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ နိုးလာတော့သူကိုယ်သူမယုံနိုင်ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ကိုယ်မှာ ရှည်လျားတဲ့ အမြီးကြီးတခုနဲ့ လှပတဲ့ အတောင်တွေပေါက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။
သူ့အတောင်တွေပေါ်က ရေငွေ့တွေဟာ နေရောင်ခြည်ကြောင့် ခြောက်သွားတယ်။ သူလှုပ်လိုက်တိုင်းလဲအတောင်တွေက လှုပ်ရှားသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာ
သူဟာ လှပတဲ့ ပုစဉ်းလေးတကောင်ဖြစ်နေပြီ။
ပုစဉ်းလေးဟာ ကောင်းကင်ပြာကြီးကိုနောက်ခံထားပြီး လေထဲမှာ အမျိုးမျိုးတောင်ပံခတ်လို့
လေဟုန်စီးနေရင်းသူကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ရေပိုးကောင်တွေကို တောင်းခဲ့တဲဂတိ၊
သူသတိရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် သူဟာ ရေမျက်နှာပြင်ကိုခွဲပြီး သူ့မျိုးနွယ်ရှိရာရေအောက်ကို
အခါခါကြိုးစားပေမယ့် သူဟာ ပုစဉ်းဘ၀နဲ့ ရေထဲကိုဘယ်တော့မှပြန်လို့မရတော့ ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
တကယ်လို့ ရေထဲကိုပြန်လို့ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှ သူ့ကို ဘယ်သူကမှမှတ်မိကြတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ သူဟာ လှပတဲ့ အရောင်စုံတဲ့ ပုစဉ်းလေးဘ၀နဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးထဲမှာ
ပျံဝဲနေနိုင်တာကို ရေပိုးကောင်လေးတွေကို ဘယ်လိုမှပြန်မပြောပြနိုင်တော့ဘူး။ ရေပိုးကောင်လေးတွေကိုယ်တိုင် သူ့လိုပုစဉ်းဘ၀ကိုပြောင်းမှပဲ ပျောက်ပျောက်သွားကြတဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့ အဖြစ်မှန်ကိုသိနိုင်ကြတော့မယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားလိုက်မိပြီး ကျယ်ပြန့်လှပတဲ့ မိုးကောင်ကင်ကြီးထဲကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ ပြန်တက်သွားတော့တယ်။
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 9:37 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : တစ်မျက်နှာဝတ္ထု, အချစ်ဆုံး, သေဆုံးခြင်း
မနက်ဖြန် သောင်္ကြာနေ့ ၁၃ ရက်..
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 11:53 PM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
အသာယာစီးဆင်း၊ တေးချင်းဖွဲ့ ယောင်
အာရုံဦးလက်၊ ငှက်တို့ စိုးစီ
ငါဦးသူ့ လျှင်၊ လုပ်ခွင်ဝေးနီး
တနေ့ ဝမ်းစာ၊ ရှာကြမစဲ
လူတို့ ဆန္ဒ ...
စာရေးသူ--> AinChannMyay~ (စာတင်ချိန်) 12:30 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ